तेम्बाथान : सिन्धुको 'कर्णाली'
सिन्धुपाल्चोक-जुगल गाउँपालिका–३ (साविक गुम्बा गाविस) मा पर्ने तेम्बाथान गाउँ सिन्धुपाल्चोकको कर्णालीभित्रको पनि कर्णालीमा पर्छ । यहाँका बासिन्दा दैनिक जीवनयापनमा पर्ने आवश्यकताका सेवाबाट बञ्चित छन् ।
गाउँमा स्वास्थ्य चौकी नभएकै कारण सामान्य बिरामीले पनि रोग पालेर बस्नुपर्छ । कि त हेलिकोप्टर चार्टर गरेर राजधानी पुग्नुपर्छ उपचारका लागि । घरबाट टाढा रहेका आफ्ना आफन्तको खबर लिन पनि आफैं पुग्नुपर्छ । कारण– सञ्चार सेवा यहाँ अझै पुग्न सकेको छैन । बस्तीलाई अझै सडकले छोएको छैन । सिन्धुपाल्चोकको सबैभन्दा उत्तरी भेगमा पर्ने जुगल हिमाल फेदीको गाउँ तेम्बाथानमा पुग्न मात्रै जिल्लाको गाडी पुग्ने बिन्दु गुम्बाथानबाट ५ घण्टा उकालो छिचोल्नुपर्छ ।
हिमाली गाउँ तेम्बाथानका बासिन्दाको प्रमुख आयस्रोत चौंरीपालन हो । आलु, कोदो र जौ खेती पनि हुने गर्छ । यहाँका केही स्थानीयले मोटर कस्तो हुन्छ भन्ने अझै देखेका छैनन् । स्थानीय कामी शेर्पा भन्छन्, “बत्ती नभएकाले टेलिभिजन हेर्न पाइँदैन, रेडियो यो गाउँमा बज्दैन ।” उनका अनुसार तलतिरका बजारबाट कोही आएमा मात्रै बाहिरको खबर थाहा पाइने गरेको छ । गाउँवासीलाई आवश्यक पर्ने नुनतेल पैदल हिँडेर उकालो छिचोल्दै ल्याइपु-याउने गरेका छन् ।
सडक छैन, उपचार गर्न हवाई यात्रा
सडक सञ्जाल नभएकै कारण बिरामीलाई उपचार गराउन तेम्बाथानवासी होलिकोप्टर प्रयोग गर्न बाध्य छन् । स्थानीय तह आएपछि वडा नं. ३ ले सडकले तेम्बाथानलाई जोड्नका लागि सुरुआत बजेट गरेपछि हेलिकोप्टरको महँगो भाडा तिर्न नपर्ने स्थानीय जितेन तामाङको आशा छ ।
“अहिलेसम्म यहाँका बासिन्दाले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्,” उनले भने, “हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लगेको पैसा तिरेको ऋण धेरैले अझै तिर्न नसकेका पनि छन् ।” वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युवाहरु कलेसिया, कतारलगायतका देशमा छन् । गाउँ युवाविहिन छ । गाउँमा युवा नभएका कारण स्ट्रेचरमा बोकेर लैजाने अवस्था छैन । सडक सुविधा नभएकै कारण थोरै पैसाले हुने उपचारको लागि पनि लाखौं खर्च गर्नुपर्ने वाध्यता छ ।
पढाई आधारभूत तहसम्म मात्रै
तेम्बाथानमा एउटा आधारभूत विद्यालय छ । बालबालिकाहरु आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेपछि पढाई छाड्न बाध्य हुन्छन् । गाउँमा रहेको तेम्बाथान आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन हुन्छ । शिक्षकहरु बाहिरका भएकाले आलोपालो गर्दे भएकाले पूरै दिन अध्यापन हुँदैन । गाउँमा विद्यालय नभएकै कारण तीनबाट बढी पढ्न नसकिएको स्थानीय मिक्मार शेर्पा बताउँछन् । अर्काे विद्यालयमा पुग्न गाउँबाट पाँच घण्टा टाढा जानुपर्ने भएकाले आफूले बीचमै पढाई छाड्नुपरेको उनले सुनाए । त्यसमाथि थप भीरको बाटो भएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।
गाउँमै भएको विद्यालय समेत नियमित सञ्चालन हुँदैन । शिक्षक अनियमित हुने भएकाले अध्यापन नराम्रो नभएपछि हालै वडाभरिका शिक्षक र अभिभावक बसेर कक्षा सञ्चालन नियमित गराउन अन्तरक्रिया गरेको वडा अध्यक्ष सानुकान्छा तामाङ बताउँछन् । “अहिले भने केही सुधार भएको छ,” उनले भने, “अन्तरक्रिया पछि शिक्षकहरु विद्यालय समयभर बाहिर जाने गर्नुभएको छैन ।”
स्वास्थ्य उपचार नै पाउँदैनन्
साविक गुम्बा गाविसमा पर्ने तेम्बाथानका जनताले सामान्य उपचारको लागि स्वास्थ्य चौकी जानपरेका कम्तीमा एक दिन पूरै हिँडेर पाङ्गर्पु पुग्नुपर्छ । सुत्केरी जाँच, गर्भपरीक्षण, बच्चालाई लगाउनु पर्ने नियमित खोपको लागिसमेत पाङ्गर्पु नै पुग्नुपर्ने कारण अधिकांश बच्चाले खोप लगाउन पाउँदैनन् । सरकारले विभिन्न समयमा अभियानमार्फत् सञ्चालन गर्ने पोलियो थोपा, भिटामिन ए लगाएतका कार्यक्रममा पनि उनीहरु सहभागी हुन सक्दैनन् ।
स्वास्थ्य सेवा लिन एक दिन पैदल जानु पर्ने अवस्था छ । जनतालाई सेवा दिलाउनका लागि अहिले तेम्बाथान नजिक पर्ने गुम्बा टोलमा नयाँ उपस्वास्थ्य चौकी निर्माण वडाकै पहलमा भएको वडा अध्यक्ष सानुकान्छाले बताए । भवन निर्माण सम्पन्न भएकाले छिट्टै स्वास्थ्य सेवा दिन थालिने उनको भनाइ छ ।
बिजुलीको लागि सोलारको भर
यो गाउँका अधिकांश घर अझै पनि टुकी बत्तीले उज्यालिन्छ । हुनेखानेले सोलार जोडेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशारणलाइन पुगेको छैन । सोलार जोडेका घरमा पनि बर्खा या चिसो मौसममा टुकी नै बाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
बिजुली नभएकै कारण पढ्ने उमेरका बालबालिका र बिरामी बढी प्रभावित छन् । टुकी बत्तीको धुवाँको कारण धेरै मानिसमा श्वासप्रश्वास र आँखा तथा टाउको दुख्ने समस्या छ । टुकी बाल्ने मट्टीतेल पनि सकिएको समयमा भने उनीहरु अँध्यारो नहुँदै खानपान सकेर सुत्ने गर्दछन् ।
विकासले गति लिन थालिसक्यो
वडाध्यक्ष, जुगल गाउँपालिका–३
भौगोलिक विकटताका कारण विकट छ वडा नं. ३ मा पर्ने तेम्बाथान गाउँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानीलगायतका समस्या स्थानीयवासीले भोग्नुपरेको अवस्था साँचो हो ।
शेर्पा जातिको बाहुल्यता रहेको यो गाउँमा सडक सञ्जाल नपुगेका कारण केही दुर्घटना भए या तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्ने रोग लागेमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी भएमा बोकेर गाडी भएको स्थानमा बिरामी पु-याउन एक दिन लाग्छ ।
पहिले एउटामात्र उपस्वास्थ्य चौकी थियो पांगर्पुमा । स्वास्थ्य सेवा लिन एक दिन पैदल जानुपर्ने अवस्था थियो । जनतालाई सेवा दिलाउनका लागि अहिले तेम्बाथान नजिक पर्ने गुम्बा टोलमा नयाँ उपस्वास्थ्य चौकी निर्माण वडाकै पहलमा भएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएकाले छिट्टै स्वास्थ्य सेवा दिन थालिनेछ ।
विकट हिमाली गाउँ भएकाले शिक्षाको पहुँच राम्रोसँग पुग्न नसकेकै हो । यहाँका सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकका लागि यो गाउँ जागिर मात्रै खाने थलोका रुपमा लिइन्थ्यो । शेर्पाहरुले चौरीपालन गर्ने भएकाले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका वर्षमा ६ महिना उच्च लेकमा चौरी चराउन जान्छन् । बाँकी ६ महिनामात्रै गाउँमा बस्ने हुँदा बालबालिकाहरु विद्यालय नगएका हुन् । यहाँ रहेका तेम्बाथान आधारभूत विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म पढाइ हुन्छ । वास्तवमै भन्नुपर्दा एक सय भन्दा बढी घर धुरी विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा भए पनि विद्यार्थी निकै न्यून छ ।
तेम्बाथानमा रहेका विद्यालयका शिक्षकहरु अनुपस्थित हुने क्रम बढेपछि शिक्षकहरुको वडा भेला गरेपछि अहिले त्यो समस्या समाधान भएको अवस्था छ । वडा कार्यालयले शिक्षकलाई विद्यालय समयभर बाहिर नजानू भन्ने आदेश दिएपछि अहिले शिक्षकहरु विद्यालयमा रहने गर्नुभएको छ । भेलामा शिक्षाको विकासका लागि शिक्षकहरुको भेला गरिएको थियो ।
शैक्षिक विकास कसरी गर्ने भन्ने बारे बहस चलेपछि यो अन्तरक्रियतात्मक भेला गरिएको हो । बालबच्चा विद्यालय नआउने समस्या बढेपछि सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनका लागि पहलकदमी भएको छ । भेलापछि तेम्बाथानको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको देखिन्छ । किनभने शिक्षक नियमित हुन थालेको विद्यार्थीसंख्या पनि बढेको छ ।
यो गाउँमा अहिलेसम्म कुनै पनि मोवाइल सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सञ्चार निकै पछाडि छ । सडक, विद्युत्सँग तेम्बाथान अझै जोडिन सकेको छैन । सडक निर्माणले भर्खरै गति लिँदैछ । स्थानीय सरकार आएपछि वडा नं. ३ को पहलमा सडक निर्माण कार्य सञ्चालन भएको छ । निर्माणाधिन बलेफी हाइड्रोपावर र सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावरको सहयोग राम्रो छ ।
तेम्बाथान मात्रै नभई सिंगो वडाभित्रको सडक मर्मत र नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । गुम्बा हुँदै अम्बाखर्कसम्म पुगेको सडक विस्तार गरेर तेम्बाथानसम्म पु-याउन वडाले ३० लाख विनियोजन गरेको छ । सडक स्तरोन्नती र थप बजेटका लागि वडाले गाउँपालिकामा पहल, हाइड्रोसँग पनि सहयोगका लािग माग गरेर तत्काल काम सुरु गर्ने योजना अगाडि बढाइसकेको छ ।
यो वर्ष गुम्बासम्म बत्ती बाल्ने पहल छ । विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य हुँदैछ । गुम्बा पुगेपछि तेम्बाथान पु-याइने योजनामा छु । सञ्चार प्रवाहका लािग मेस्यिप्ल्हा डाँडामा यही महिनाभित्र नेपाल दूरसञ्चारको सेवा प्रवाह हुन्छ । टावर निर्माण भइसक्यो । पांगर्पूमा सिडिएमए सञ्चालन भइसक्यो ।
यो गाउँमा विकास पु-याउन मैले निकै मेहनत गरिरहेको छु । स्थानीयवासीमा जनचेतना प्रवाह गर्न केही कार्यक्रम लागू भएका छन् । विद्युत्, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षामा परिवर्तन गरेर विकासमा पछाडि परेको तेम्बाथानवासीलाई सदरमुकामकै जस्तो सुविधा दिलाउनका लागि विविध योजना अध्ययन वडाले गरिरहेको छ ।